"ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၁၀:၃၉၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၂၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ လ
မြို့နယ်များ စာရင်းအောက်မှ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြို့အဆင့်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်နှင့် ကျေးရွာအသစ် သတ်မှတ်ပေးလိုက်သော အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ source .. http://www.gad.gov.mm/sites/default/files/general.pdf
၁၃:၂၅၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၃၉၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
NCAMyanmar (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
အရေးမကြီး (မြို့နယ်များ စာရင်းအောက်မှ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြို့အဆင့်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်နှင့် ကျေးရွာအသစ် သတ်မှတ်ပေးလိုက်သော အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ source .. http://www.gad.gov.mm/sites/default/files/general.pdf)
**[[လပွတ္တာမြို့နယ်]]၊ [[မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်]]၊ ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲ
မြို့ပေါင်း (၃၉၄၅) မြို့၊ ရပ်ကွက်ပေါင်း (၂၇၃၃၀၀) ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၁၉၁၉) အုပ်စု၊ ရွာပေါင်း (၁၁၉၀၇၁၁၈၆၄) ရွာ ရှိသည်။ <ref>နေပြည်တော် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် နှင့် ပြည်နယ်များရှိနေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်းရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ဦးရေကျေးရွာဦးရေ စာရင်းချုပ် (၁၆. ၂. ၂၀၁၆၁၆−၁၀−၂၀၁၉)</ref>
=== အခြား မြို့ရွာများ ===
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/536651" မှ ရယူရန်